Sagantaa SWO - Dilbata Adoolessa 25, 2021 sagalee qofaan - Independent Oromia
Sagantaa SWO Dilbata Adoolessa 25, 2021
Loltoonni MKII, humna ABUT waraanuuf bobbaafaman danuun baqachaa jiraachuu
Milishoonnii fi Loltoonni MKII, kanneen humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) waraanuuf kutaalee Impaayerattii garaagaraa keessaa gamasitti bobbaafaman danuun hidhannoo isaanii gatuun, gamisnis hawaasa naannootti gurgurachuun, baqachaa jiraachuu.
Loltoota kanneen keessaa kanneen qabaman, kaan qaamotaa fi loltootuma MKII’n battala ajjeefamuu; kaanis to’annoo ajajoota waraana MKII jala galfamuun miliqfamuu.
Oromoon Walloo humna ABUT akka waraanuuf dirqamsiifamuun gama mooraa leenjii waraanaatti galfamaa jiraachuu
Waraana garee humnoota Mootummaa Naannoo Amaaraa fi Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa, gam-kaaniin immoo, humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) gidduutti geggeeffamaa jiru irratti, gara garee humnoota MKII fi Mootummaa Naannoo Amaaraa goruun humna Naannoo Tigiraay akka waraananiif jecha, Oromoonni Walloo dirqamsiifamuun gamasitti geeffamaa jiraachuu.
Maanguddoon Oromoo, Obbo Addunyaa Amantee, WBO gargaarte jedhamuun, Giddu-gala Oromiyaa, Lixa Shaggar, Ona Gindabarat keessatti hidhamuun dararamaa erga turee booda, Kamisa Adoolessa 22, 2021 mana hidhaa san keessaa baafamuun ajjeefamuu, sirni awwaalchaa isaas Sanbata kaleessaa, Ona Gindabarat Ganda Gammadaa jedhamu keessatti kan raawwatame ta’uu.